Mawduucyada Ray Beharry ee Martech Zone |
Maqaallada by Ray Beharry
Waxaan u hayaa dareen suuq geyn, istiraatiijiyad, farsamo, sheeko sheeko, iyo barashada cimrigeyga. Astaamaha xirfaddaydu waxay u keenaysaa sixirka tikniyoolajiyadda dhagaystayaasha aan hore u qaadan. Waxaan ogaadaa sida magacyadu u nool yihiin, u kala soocaan, uguna xirmaan iyagoo u sheegaya sheekooyinkooda da'da dhijitaalka ah. Ka VP-ga Suuqgeynteyda, qibradeyda waxay tahay sameynta istiraatiijiyad ganacsi, iyo fulinta dejinta nooca, aaladaha isgaarsiinta, aragtida macaamiisha, iyo safarka macaamiisha ee ku wajahan dijital, iyo bulshada
Pollfish: Sida Loogu Gudbiyo Sahaminta Shabakadaha Caalamiga Ah Si Wax Ku ool Ah Mobile
Axad, Maarso 5, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Ray Beharry
Waxaad abuurtay sahan cilmi baaris suuq ku habboon. Hadda, sidee baad u qaybin doontaa sahankaaga oo aad ku heli doontaa jawaabo tirakoob ahaan aad u tiro badan si deg deg ah? 10% ka mid ah $ 18.9 bilyan oo cilmi-baaris suuqa adduunka ah waxaa lagu kharash gareeyay sahannada internetka ee Mareykanka Waxaad ku celcelisay waqtigan in ka badan intii aad ku jirtay mashiinka kafeega. Waxaad abuurtay su'aalaha sahaminta, waxaad abuurtay jawaab kasta oo isku dhafan – xitaa waxaad kaamilisay sida su'aalaha u kala horeeyaan. Kadib waxaad dib u eegis ku sameysay sahanka, oo waad bedeshay